Chuwi Hi10 Plus nyochaa na mpụga kiiboodu | Akụkọ akụrụngwa
Miguel Gaton | | android, Nyocha, Windows
Ọ bụrụ n’izu ụka ole na ole gara aga anyị nyere gị ya ihe nyocha Chuwi Vi10 Plus, taa obu uzo nwanne ya nwanyi nke okenye, Chuwi Hi10 gbakwunyere, mbadamba nkume nke na-enye ihe karịrị ihe na-adọrọ mmasị na nke na-apụ apụ maka ya Dual boot nke na-enye anyị ohere ịrụ ọrụ na sistemụ arụmọrụ (gam akporo) na Windows 10.
Ọzọkwa n'oge a anyị gbalịrị keyboard izizi mbụ para la Chuwi Hi10 Plus (válido tambien para la Vi10), un accesorio indispensable si quieres trabajar con la tablet para escribir documentos o mandar emails de una manera cómoda y efectiva. Su precio es de 205€.
1 Hi10 Plus, na mpụga otu ihe dị ka Vi10 Plus
2 Ike n'ime
3 Sistemụ arụmọrụ abụọ
4 Mbadamba mpụga, ezigbo enyi
5 Ezigbo obodo eji
8 Foto osisi
Hi10 Plus, na mpụga otu ihe dị ka Vi10 Plus
Nke a bụ ihe mbadamba Chuwi Hi10 Plus dị ka ya
N’anya, Chuwi Hi10 yiri nke mbụ ahụ. Bụ a dị mma n'anya ma mara mma, na ihe ndị dị mma nke na-enye ezigbo mmetụ nke iji ya eme ihe na-enye akụkụ zuru oke dị mma na ngwaọrụ ahụ.
Gbaa ịnyịnya a 10,8 inch ihuenyo na usoro 3: 2 na mkpebi HD zuru ezu (1920 x 1080), nke na ọkwa eserese na-enye ihe niile anyị nwere ike ịtụ anya site na ngwaọrụ na mpaghara a. Na ala ya nwere njikọ magnetik maka keyboard mpụga, nke mere na ijikọ na ịkwụpụ ya dị nnọọ mfe ma dịkwa mma ịme.
na ndị na-ekwu okwu dị n'akụkụ nke mbadamba nkume, ihe na-emeghị na ụdị Chuwi Hi8 na nke ahụ bụ doro anya na ọ dị mkpa mmezi ebe ọ na-enye ohere ịnweta ụda dị mma karịa mgbe ngwaọrụ ahụ na-ezu ike n'elu. Nke a bụ ihe ya na ndị ọzọ so na-akụ, ebe ọ bụ na mgbe Hi8 ezubere iji naanị dị ka mbadamba, Emere Hi10 ka eji ya mee iheN'ihi ya, enwere ike iji Remix OS na Windows 10 sistemụ arụmọrụ.
N'ime, mbadamba nkume na-abịa na nhazi Intel Cherry nzọ ụkwụ Z8300 64bit Quad isi na 1.44GHz na 4 GB nke RAM, ihe dị oke mkpa iji mee Windows 10 ka ọ dị mfe ma nye anyị ohere iji ya dị ka laptọọpụ iji akwụkwọ ozi, dee akwụkwọ, ... mana nke ahụ ezughi oke maka ịdezi foto ma ọ bụ igwu egwuregwu kachasị ọhụrụ iji tinye ihe atụ abụọ chọrọ arụmọrụ ka elu .
Ọ bụrụ na ị na-eji mbadamba nkume na Remix OS ị ga-achọpụta na ọ na-arụ ọrụ nke ọma karịa mmiri, ọ bụkwa na enweghị obi abụọ ụdị mbadamba gam akporo dị mfe karịa sistemụ arụmọrụ Microsoft.
Sistemụ arụmọrụ abụọ
Dị ka anyị kwurula, ndị Chuwi Hi10 nwere usoro buut abuo nke ahụ na-enyere anyị aka ịhọrọ ozugbo anyị gbanyere mbadamba nkume ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ịrụ ọrụ Windows 10 ma ọ bụ jiri Remix OS. Na ihuenyo mbụ anyị nwere 10 sekọnd iji họrọ sistemụ arụmọrụ, ma ọ bụghị nke edere na ndabara ga-amalite, ọ bụ ezie na emesịa anyị nwere ike isi n'otu sistemụ arụmọrụ gaa na nke ọzọ n'ụzọ dị mfe ekele maka usoro mkpirisi.
Nwere ike ịgbanwe si gam akporo na Windows na Anglịkan ngwa ngwa
Sistemụ arụmọrụ na arụ ọrụ nke ọma. Remix OS dị mfe karịa Windows ọ na-egosi mgbe ị na-arụ ọrụ na mbadamba, ịmepe ngwa, wdg. Windows 10 dị arọ mana ojiji ya dị oke mkpa ma ọ bụrụ na anyị chọrọ iji mbadamba nkume dịka a ga - asị na ọ bụ laptọọpụ.
Mbadamba mpụga, ezigbo enyi
O doro anya na nke a Mbadamba mpụga bụ ezigbo enyi iji nweta ọtụtụ ihe na Chuwi Hi10 Plus. Ekele maka mgbakwunye a, ịnwere ike iji mbadamba nkume dị ka laptọọpụ n'ụzọ dị mfe ma dị mfe ma na-ahapụghị mkpịsị aka gị na ndidi na-anwa ide ederede ogologo na ihuenyo mmetụ.
Ejikọtakwara keyboard ahụ njikọ ndọta nke ahụ dị mfe ijikọ ma kwụpụ. Na mgbakwunye na ijere dị ka keyboard dị na mpụga, ọ na-arụkwa dị ka mkpuchi mkpuchi maka mbadamba, na-ahụ na echedobere ya na ọkọ ma ọ bụ obere ọdịda. Na ọkwa nke ihe, ọ na-akwado otu ọkwa dị elu dị ka nke a na-enye site na mbadamba.
Ezigbo obodo eji
Ekele ya maka ikike batrị 8400 mAh, mbadamba nkume na-enye ohere ruo awa 6 nke iji kpụ ọkụ n'ọnụ na arụmọrụ kachasị na-egwu vidiyo ma ọ bụ na-egwu egwuregwu. Maka iji ngwaọrụ (ijikwa ịntanetị, ịlele ozi ịntanetị, wdg) a na-agbatị oge ahụ ruo awa 15-16 Nsogbu adịghị.
Chuwi Hi10 Plus na kiiboodu mpụga
Dual Remix OS & Windows 10 sistemụ arụmọrụ
ọma ike mpụga keyboard
Ezigbo ndụ batrị
Enwere ike ịme ka nkwupụta ụda ka mma
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ nkọwa niile nke Chuwi Hi10 Plus na keyboard dị na mpụga, ebe a bụ foto foto zuru ezu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Nyocha » Chuwi Hi10 Plus nyochaa na keyboard mpụga
Hi Miguel, isiokwu dị mma, ajụjụ nwere keyboard, mbadamba nkume nwere ike ijide ya na njikọ ya ka ọ ga-ezu ike na mkpuchi apịaji? Ọ bụ ihe na-eme m laghachi na Pro
Mango kpọrọ Wallapop ahịa maka ngwa ahịa o zuru